Ny fandraisana anjara amin'ny zavakanto sy ny kolontsaina amin'ny fitoniana ara-tsosialy-politika amin'ny firenena - Afrikhepri Fondation
Ny fandraisan'anjaran'ny kanto sy ny kolontsaina amin'ny fitoniana ara-tsosialy sy politika amin'ny firenena
LMipoitra ity fandinihana ity: ao anaty krizy ny fiarahamonin'olombelona ary na aiza na aiza misy resaka sivilizasiona refounding, na dia tsy ampiasaina foana aza ny teny hoe refoundation. Ny azo antoka dia miresaka krizy amin'ny sivilizasiôna isika ary ny loza mitatao amin'ny fahaveloman'ny zanak'olombelona.
Raha ny fahalalantsika azy dia mbola tsy nisy mpitondra fanavaozana nanakatra ny takelaka mba hanondro ny fomba sy ny fomba fanarenana ilaina. Na izany aza, araka ny fahitana azy, amin'ny reflex, ny tianay holazaina amin'izany dia ny famolavolana ny rafitra libero-kapitalista manimba nefa mbola tsy nahalala ny fomba hanaovana izany.
Ity tsy fahatokisan-tena be dia be ity ary ny fahatsapana ho faty dia mahasarika ny olona rehetra, eny fa na dia ireo olona tsy dia mandroso aza.
Manoloana ny krizy mandrahona dia manan-jo hanao ny anjara birikin'izy ireo koa ny taloha: iza no mahalala hoe avy aiza ny famonjena?
Raha tsy misy pitsiny napetrakay momba azy io, dia holazainay fa ny ampahany amin'ny hetsika ara-javakanto amin'ny fanarenana fiaraha-monina amin'ny krizy (struktural) dia tena ilaina.
Mba hiorenan'ny filazantsika dia hivoatra aloha isika fa voaporofo fa ny fiarahamonin'olombelona dia nipoitra tany Afrika Atsinanana niaraka tamin'ny fisehoana ny kanto ana (lava-bato teo amin'ny rindrin'ny lava-bato taloha).
Izany dia niteraka ny fahaterahan'ny fiteny izay nanjary rafitra ho an'ny fiaraha-monina. Ity fitaovam-pifandraisana ity dia ny famoronana izay nanjary namboarina ho fananganana tany am-boalohany ny "ray mpanorina" izay hoditra mainty, ny mutation sy ny fanamorana ny hazakazaka mbola tsy tontosa.
Ity tohan-kevitra voalohany ity, izay ifotoran'ny fiarahamonina tena izy, amin'ny alàlan'ny firafitry ny fiteny natomboky ny hetsika ara-javakanto dia notohanan'ny teknika (fanombohana) ny psycho-therapy izay milaza fa ny famoronana ireo endrika preverbal mandrafitra ny Teny dia mitaky fifehezana ara-tandindona ireo tarigetra sadisista. miasa amin'ny natiora.
Tsy isalasalana fa nila endrika fisehoana miavaka mitondra ny Teny hampiroborobo ny fifehezana ny hetsiky ny olona taloha ary ny fisian'ny singa mifototra amin'ny fiteny: sine qua tsy an'ny hetsika famoronana ny rafitra kolontsaina tamin'ny niandohan'ny fampiroboroboana ny saron-tava, dihy, tononkalo, angano mpanorina sns.
Voaporofo noho izany fa tsy ny fototry ny fandaminana ara-tsosialy ny fiainana ara-toekarena.
Fotoana tokony hametrahana fanontaniana amin'ny famoretana ataon'ny toekarena arak'izany ny krizy ara-tsosialy rehetra dia miorim-paka amin'ny fandaminana ny toekarena ary mba hananganana ny fiarahamonina dia mila miasa bebe kokoa ianao hamokarana vola bebe kokoa.
Ny zava-niainan'ny fitsaboana aretin-tsaina sy ny fitsaboana ara-tsaina dia mampianatra antsika fa ny krizy ara-drafitra ankehitriny dia manana ny fototry ny fanimbana ny fiteny eo ambanin'ny fanafihana miverimberina ataon'ny tolona tsy misy indrafo ho fananana, tolona izay mamerina antsika amin'ny vanim-potoana talohan'ny fiaraha-monina fony nisy olona tsy voarindra. natolotra tamin'ny tsindrimandry velona niteraka ny tolon'ny rehetra manohitra ny fiainana mahafaty rehetra eo amin'ny fiarahamonina.
Mazava araka izany fa ny fananganana sy ny fiaraha-monina ara-tsosialy dia mamerina ny fiverenan'ny asa fananganana ny fiaraha-monina, izay asa kanto.
Tsy maintsy miarahaba ny fandraisana andraikitry ny “Fetiben'ny Djaka” an'i Divo sy ny kaomisera jeneraliny: Alexandre Drame Jhronix, noho ny fiheverana an'ity lohahevitra lehibe ity ho an'ny fahaterahan'ny fiarahamonina anaty krizy. Ohatra tsara harahina.
Grobli Zirignon, Ny psychoanalyst sy ny psychotherapist
Ny zavakanto sambatra - Dalai Lama sy Howard Cutler (Audio)